खोटाङको हलेसीबजारमा भएको आगलागी
धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल खोटाङको हलेसीबजारमा मङ्गलबार राति भएको आगलागीबाट नष्ट भएका घरमा पुरिएका सामग्री निकाल्दै विद्यार्थी । मङ्गलबार राति स्थानीय मगम राईको घरबाट सुरु भएर पैmलिएकोे आगोबाट सात घर नष्ट भएको थियो ।
तस्बिर : केदार मगर·खोटाङ, रासस
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विजया दशमीमा सर्वसाधारणलाई टीका लगाउँदै । तस्वीर : नवीन पौडेल, रासस
बारपाकको कोदोबारी (फोटोफिचर)
बारपाक (गोरखा) । जिल्लाको सुलिकोट बारपाक गाउँपालिकामा अहिले तराईमा धान झुलेजसरी कोदो फुलेको छ । छपक्कै भरिँदै गरेको कोदोको बाला टाढाबाट झट्ट हेर्दा निस्किनलागेको हरियो धानजस्तो देखिन्छ । बारीभरिको कोदोले भूकम्पले
'घर जलेर आज खरानी भो सबै' !
सोमालियाको राजधानी मोगादिसुमा ठूलो विस्फोटपछि शव नजिकै उभिइरहेका मानिस र पृष्ठभूमिमा ट्रक बमले क्षतविक्षत पारेका घरहरु । यो गत वर्षको फाइल तस्बिर हो । १ वर्षअघि गराइएको घातक ट्रक बममा परी
च्याम्पियन बन्यो नेपाल !
काठमाडौँ। नेपाल आईसीसी टि-२० विश्वकप एसिया ( पूर्वी ) छनौट प्रतियोगिताको विजेता बनेपछि तस्बीर खिचाउदै । प्रतियोगिताको अन्तिम खेलमा सिंगापुरसँगको खेल वर्षाले बाधा पुर्याएपछि नेपालले सिंगापुरले एक एक अंक बाढ्दै